बहसका लागि आह्वान : १० वर्षे महान जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलन | रातो पर्खाल
बहसका लागि आह्वान : १० वर्षे महान जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलन
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौ । १० वर्षे जनयुद्ध, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र छुवाछुत मुक्त समाजको मुख्य मुद्धा र नारा लिएर भएको थियो ।
१० वर्षे जनयुद्धले उठाएका मुल मुद्धामा केन्द्रीत भएर १२ बुँदे सहमति सम्झौता मात्र भएन सात राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा ६२/६३ को जनआन्दोलन मार्फत २ सय ४० वर्षदेखि जगडिएको राजतन्त्रले घोडा टेक्न बाध्य भयो । त्यसपछि भएको दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनबाट अन्तत घनिभुत छलफल विमर्श पश्चात ०७२ अशोज ३ गते संविधान जारीनै भयो ।
मुलत संविधानसभाबाट जारी भएको ०७२ को संविधानमा १० वर्षसम्म भएको जनयुद्धले उठाएका मुलभुत मर्महरु समेटेको जगजाहेरनै छ । संघीयता अन्तर्गत ७ सात प्रदेशमा मुलुक रुपान्तरित भयो र अहिले सवै प्रदेशहरु अभ्यासरतनै देखिन्छन् । यसैगरि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिनै राजतन्त्रको समुल अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भईसकेको छ । राज्यका हरेक संरचना संयन्त्रहरुमा समावेशिताको अभ्यास भईनै रहेको छ । मुलुक धर्मनिरपेक्षता घोषणा भईसकेको छ । यता जातीय विभेद छुवाछुतका घटनाहरु समेत निर्मुल हुने क्रममा छ ।
तर आज तिनै मुलभुत मर्म बोकेको संविधान कार्यन्वयन गर्ने तहमा भने यसै मर्म विपरितका गतिविधि गर्नेहरु नेतृत्व तहमा पुगे वा भनौ कार्यन्वयन गर्ने तहमा पुगे । आज तिनै १० वर्षे जनयुद्धले बोकेको मुल मर्म भावनालाई जवरजस्ति मानेजस्तो मात्र गर्ने नाटककारहरु मुलप्रवाहको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । र हिजो तिनै मुद्धाका लागि हजारौको ज्यान आहुति दिदै स्थापित भएको पार्टीलाई किनारकृत गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।
ती नाटककारहरुलाई खुल्ला बहसका लागि चुलो निम्तो दिन चाहन्छु । के यो निम्तो स्विकार्न तयार हुनुहुन्छ ? फल मन पर्ने, फल पाउँदा खुसि हुने प्रफुल्ल हुने तर बोट मन पराउन नचाहने वा देखेर अनेक बाहानाबाजीको नाटक गर्ने शैली आज मुलप्रवाहमा हावी भएको छ ।
माओवादी र माओवादी आन्दोलन मन नपर्ने, माओवादीले १० वर्ष राजतन्त्रको विरुद्ध धर्म सापेक्षताको विरुद्ध एकात्मक राज्यको विरुद्ध युद्ध लडेर जसरी ति मुद्धा स्थापित भएको छ । संघीयता स्थापित भएको छ । तिनै चिजको मालिक बन्न तछाडमछाड गर्ने ? आज हामी आम जनतासँग क्षमायाचना गर्न चाहन्छौ । यो अर्थमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छौ कि संघीयता धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्र मन नपराउनेलाई त्यसैको नेतृत्वको अगुवाई गर्न लगाईयो । बादरलाई लिस्नो बनाईदिन सहयोग गरेकोमा हामी आत्माआलोचित हुन चाहन्छौ । सत्तालिप्त चरम दलाल पुँजिपति र भ्रष्टहरुले बास्तव्मा अहिले संघीयताको धज्जि उडाईरहेको हेर्दा खिन्न छौ । किनकी यी सव चरम दुरुपयोगका उदाहरण हुन् ।
बयलगाडामा सवारहरुले संघीयतालाई लुटिखाने भाडो बनाए र लुटिरहन तल्लिन भए । जसको विचार उसको नेतृत्व नभए भान्सा लुछाचुडी गर्नूबाहेक अरु केही नहुदो रहेछ । अव स्थापित उपलव्धीको रक्षा गर्नका लागि सम्पुर्ण अग्रगामी र क्रान्तिकारी युवाहरु एकजुट भएर मात्र सम्भव हुने निश्चित छ ।
अव बहसका लागि एकजुट भएका युवाहरु तयार रहनुको विकल्प छैन । तथ्य र ठोस प्रमाणसहित स्वच्छ र स्वस्थ बहसका लागि प्रतिगामी र तिनका मतियारहरुलाई निम्तो दिनुको विकल्प रहेन । केही रुपैयाँ र योजनासँग विचार साटेर हैन, क्षणिक स्वार्थमा लिप्त भई कसैको दास भएर पनि हैन । मुलुक र जनजीविकाको सवालमा प्रष्ट भएर बहसका लागि तपाई आउन तयार हुनुहुन्छ ?
हामी त तयार छौ । बहसका लागि निम्तो दिन चाहन्छु ।
( मुक्मिन योङ कम्युनिष्ट लिग वाईसिएलका भोजपुर जिल्ला संयोजक हुन् । यो मुक्मिनका नितान्त व्यत्तिगत विचार हुन् । )
पाँच वटा राजनीतिक दलले गरे राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विद्रोह
धर्मशाला सेभेन स्टार होटल जस्तो रहेकाे मन्त्री आलेकाे प्रतिकृया १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने गरि नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारीकाे तयारी १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
अमेरिका र जापानमा सुनामीकाे सावधानी १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
मानवीय सहायता प्रदान गर्न नेपाली टाेली काबुल १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
आयाेगले दललाई भन्याे – वैशाखमा चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यता छ । १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
पछिल्लो २४ घण्टामा ३५५३ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
प्रचण्ड र विप्लवसँग पार्टी एकता सम्भव छैन – वैद्य १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकद्वारा चार बुँदे निर्देशन १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:०७